Soo dejisan RegCleaner 4.3.0.780 – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaRegCleaner
RegCleaner – software ah si aad u nadiifiso diiwaanka nidaamka ka mid ah qashinka faylka. software The baaritaanku diiwaanka wixii macluumaad ah ee ku saabsan ururada software iyo file fog. RegCleaner awoodo si ay u fuliyaan falanqayn meel disk qayb ah ama buuxda oo muujiya goobta, taariikhda iyo nooca files ah. software The u saamaxaaya in ay ka saarto xogta codsiyada dhacsan, nadiif ah macluumaadka xaylkeed oo ku saabsan software iyo tirtirto faylasha aan loo baahnayn ama haraaga ah. RegCleaner sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan gurmad ah ka hor inta performing tallaabada lagama maarmaanka ah.
Banaynta xogta ku saabsan software laga saaray
Removal of xogta software dhacsan
Ka kaxaynta oo ka mid ah files la rabin ama haraaga ah
Falanqaynta of meel disk ah
Soo dejisan RegCleaner
Faallo ku saabsan RegCleaner
RegCleaner Xirfadaha la xiriira